Factory Products - Shiinaha Products-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaal
tirtir qalalan (qasacad)
75% Masaxda Aalkolada
Masaxyada Qalalan (Canister)
(Waxaan haynaa kaliya shahaadada EPA ee warshadeena, Maahan alaabada EPA)
(Waxaan ku siin karnaa tirtir qallalan + qasacad, ka dibna dareeraha ayaa lagu sifeynayaa godka meesha loo socdo)
Si loo hubiyo tayada ugu fiican ee masaxa qalalan iyo qasacad
Jeermiska Dhirta oogada
(Kaliya waxaan haynaa shahaadada EPA ee warshadeena, Maahan alaabada EPA）
Jeermiska jeermiska waxay baabi'isaa 99.9% Fayrasyada iyo Bakteeriyada by 3 jeer shukumaan warqad:
Nadiifi waxbadan, wax yar isticmaal
Dilaa Falalka 8 fayrasyada qabow iyo ifilada sida Staph (MRSA), Norovirus, Hargabka A, iyo inbadan.
Dila fayraska COVID-19.
Si dhakhso ah u dilo 99.9% jeermiska iyo bakteeriyada.
Masaxa Aalkolada (Nadiifinta Nadiifinta)
(Shahaadada FDA / NPN ayaa loo heli karaa alaabada）
(Waxaan ku siin karnaa tirtir qallalan + qasacad, ka dib khamriga waxaa lagu sifeynayaa weelka ku yaal halka loo socdo
Maqaarka jilicsan ee jilicsan ee gunta hoose ee dhallaanka ayaa qadarinaya qaaciddeena ku saleysan looshannada Aloe Vera
Taasi waxay si tartiib ah u nadiifisaa una ilaalisaa maqaarka ilmaha si siman oo qoyan.
Waxaa laga heli karaa noocyo ay ka mid yihiin baakadaha dib-u-buuxinta urta, xirmooyinka dib-u-buuxinta aan udgoon iyo tubbada aan udgoon lahayn.
Masaxayada dhallaankayagu waxay ku habboon yihiin dhammaan baahiyahaaga isticmaalaha dhammaadka ah.
Maskaxda Juan Juan Cosmetic waxay leedahay sumcad hufan oo ah warshad OEM oo loogu talagalay magacyada caanka ah ee adduunka ee warshadaha Qurxinta. Si feejigan ula soco in tirtirka qurxinta ay tahay qodobka ugu weyn ee macaamiisha da ’kasta iyo nooca maqaarka. Maaddaama aan nahay suuq adag oo joogto ah, waxaan ku faraxsanahay inaan soo saarnay tayo wanaagsan oo tirtirta qurxinta iyada oo ku saleysan isbeddelada macaamiisha iyo tikniyoolajiyadda cusub.
Waxaan si joogto ah ugu dadaalnaa kobcinta wax soo saarka si aan u hubino in maamulayaasheenna oem loo ilaaliyo ciyaarta ka hor.
In ka badan 10 sano, Juan Juan waa shuraako lammaane adduunka magacyada tirtirayaasha ah si loo nadiifiyo, loo nadiifiyo loona nadiifiyo malaayiin guri.
Maamulayaasheena caanka ah waa kuwo karti iyo khibradba ku leh shaqada guriga sidaa darteed xalal ku habboon ayaa la siiyaa dadka jecel inay nadiifiyaan oo ay daryeelaan guryahooda. Marka nadiifinta usbuuclaha ah ee meticological waxaa lagu beddelaa nadiifin dhakhso ah oo soo noqnoqota marka tirtiraha guryaha loo isticmaalo maalin kasta. Maaddaama ay tahay badeecad hoggaamineysa suuqa, Qoysaska ku masaxa waxyaabaha udgoon ee kala duwan iyo urta daabacan ee xaddidan ayaa ah fikrad iyo cabbir cusub.
Microfiber (ama microfibre) waa fiber ka samaysan synthetic ganaax ka badan hal denier ama decitex / dun, isagoo dhexroor ka yar toban mikrometres. Xarig xariir ah wuxuu ku saabsan yahay hal been oo qiyaas shan meelood meel dhexroorka timaha aadanaha.
AQOONSIGA BADHASHADA BADAN, EEYAHA BADAN, AMA WAQTIGA LAGU Kordhiyo guryaha - Suufyada waaweyn ee kaarboonka firfircoon ee firfircoon waxay u fiican yihiin noocyada waaweyn ama eeyaha badan, oo daboolaya aag dusha ka weyn marka loo eego suufka eyda caadiga ah.
TABBAHA XADHKA AH EE ADHESIVE KA HORTAGA SOO DHAWEYNTA- Looma baahna in laga walwalo suufkaan yar ee loo yaqaan 'puppy pads' oo sibiibix ah kuna sii siqaya dhulka oo dhan; tabka geesaha ee koollada ku dheji suufyadan yar yar ee meesha ku jira
Dahaarka balaastigga ee fidsan ee aan dheecaanka lahayn iyo lakabyada qufulka ayaa ilaaliya sagxadda iyo roogga.
Cinwaanka: No.20 ZhaoYu Road, Xarunta Warshadaha FuWan, Degmada Cangshan, Fuzhou, Fujian, Shiinaha